UCL Final ကို ရွှေ့‌ခံရနိုင်တဲ့ ရုရှ ၊ အဂွေရို ရဲ့ ရုပ်တုဖွင့်မယ့် အချိန် ၊ ယူနိုက်တက်ဆီ မခေါ်စေချင်တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားတို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
UCL Final ကို ရွှေ့‌ခံရနိုင်တဲ့ ရုရှ ၊ အဂွေရို ရဲ့ ရုပ်တုဖွင့်မယ့် အချိန် ၊ ယူနိုက်တက်ဆီ မခေါ်စေချင်တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားတို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
February 22, 2022 February 22, 2022 - by Editor
ရုရှ ရဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပွား နေတဲ့ ကိစ္စတွေ အပေါ် ဥရောပ ယူနီယံ က ဆန်ရှင်တွေ ချမှတ် သွားဖို့ လုပ်ဆောင် နေပြီး ဒီလို ပိတ်ပင်မှုတွေ ဟာ ရုရှ လိဂ် ကလပ်တွေ ရဲ့ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေ ကို သက်ရောက်လာဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။
ဒီနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် ကို ရုရှ နိုင်ငံ ၊ စိန့်ပီတာစဘတ် မြို့မှာ ကျင်းပဖို့ သတ်မှတ် ထားပြီး UEFA အနေနဲ့ အဆိုပါ ကိစ္စကို ပြန်လည် သုံးသပ် ပြောင်းလဲရဖွယ် ရှိလာနိုင်တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
UEFA ဟာ မနှစ်တုန်းကလည်း ကိုဗစ် စည်းမျဉ်းတွေကြောင့် မန်စီးတီး နဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် ကို အစ္စတန်ဘူလ် အစား ပေါ်တိုကို ပြောင်းရွှေ့ ကျင်းပခဲ့ ဖူးပါတယ် ။
လတ်တလော မှာတော့ UEFA ဘက်က စိန့်ပီတာစဘတ် ဖိုင်နယ် ကို ကွင်းပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမျိုး မရှိ သေးဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ပရိသတ်တွေ ကတော့ မနှစ်ကလိုမျိုး ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် ၂ သင်း ဗိုလ်လုပွဲ တက်ခဲ့ပါက ဝင်ဘာလေ မှာ ဗိုလ်လုပွဲ ကျင်းပစေလို ကြတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို နေကြပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ၊ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် နဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဆီဇာ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ တို့ကို နွေရာသီမှာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံး ရနိုင်ချေ ရှိတာကြောင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင် နေပြီး ဝုဗ် နောက်ခံလူ မက်စ် ကေမန်း ကို ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန် က လက်စတာ ကွင်းလယ်လူ တီလေမန်းစ် နဲ့ ဝုဗ် ကွင်းလယ်လူ ရူဘင် နီဗက်စ် တို့ ဟာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကွင်းလယ် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်း ပေးနိုင်မယ့် ကစားသမားတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုကာ အဆိုပါ ကွင်းလယ်လူတွေ ကို မဝယ်ယူဖို့ တိုက်တွန်း အကြံပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အနားယူလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဆာဂျီယို အဂွေရို က စီးတီး အသင်းဟာ သူ့ရဲ့ ပုံတူရုပ်တု ကို လာမယ့် မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အစ်တီဟတ် ကွင်းရှေ့မှာ ဖွင့်လှစ် ထားရှိ သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စီးတီး ဟာ ဗင်းဆင့် ကွန်ပနီ နဲ့ ဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗား တို့ရဲ့ ရုပ်တုတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းက ဖွင့်လှစ် ထားရှိ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။
အသက် ၈၁ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီး ဂန္ထဝင် ဘောလုံးသမားကြီး ပီလီ ဟာ ဆီးလမ်းကြောင်း ပြဿနာကြောင့် ဆေးရုံကို နောက်တကြိမ် တက်ရောက်ကုသ နေရတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အမေရိကန် အမျိုးသမီး နဲ့ အမျိုးသား ဘောလုံး အသင်း ကစားသမားတွေဟာ တူညီတဲ့ လုပ်ခ လစာ ရရှိမှု အပေါ် သဘောတူညီ ခဲ့ကြတာကြောင့် လစာ ဆတူ ရရှိ ကြတော့မယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လိဒ် ယူနိုက်တက် နည်းပြ မာဆယ်လို ဘီယေဆာ ဟာ မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ လိဒ် ကစားသမား ကော့ချ် ရဲ့ သွေးထွက်မှု ကို တိတ်အောင် မပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ဘဲ လူစားလဲစေခဲ့ရတယ်လို့ ဝေဖန်ခံ နေရတဲ့ လိဒ် ဆေးအဖွဲ့ အပေါ် ကာကွယ်ပြောဆို ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ သတင်းကြီး နေတဲ့ PSG နည်းပြ ပိုချက်တီနို ကို စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကတော့ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ လူငယ် နောက်ခံလူ ရော်နယ် အာရူဟို ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article တော့တင်ဟမ်တို့ မန်စီးတီးကို အံ့အားသင့်ဖွယ် နိုင်သွားခဲ့တဲ့ အပေါ် သူဘယ်လို တုန့်ပြန်ခဲ့သလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိ်ုက်တဲ့ ကလော့
Next Article မန်စီးတီးနားကို ၃ မှတ်တိုးမယ့် လီဗာပူး ၊ လန်ဒန် ၂ သင်းရဲ့ အဆင့် ၄ အိပ်မက်တွေနဲ့ . . . ကြားရက် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကျန်တွေအတွက် ခန့်မှန်းချက်များ